Hoggaamiyihii Daacish Abu Bakar Al-Baghdadi Marunba In La Diley - Hoyga Wararka
Home Somali News	Hoggaamiyihii Daacish Abu Bakar Al-Baghdadi Marunba In La Diley
Hoggaamiyaha kooxda Daacish Abu Bakar Al-Baghdadi ayaa la rumeysan yahay in lagu dilay howl-gal ay fuliyeen ciidamada Mareykanka, waxaa sidaas werinaya warbaahinta Mareykanka.
Militariga Mareykanka weli si rasmi ah uguma dhowaaqin geerida Al-Baghdadi, hase yeeshee madaxweyne Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka xalay ku yiri “Wax aad u weyn ayaa dhacay goor dhow.
Waxyar kadib qoraalkaas, ayaa Aqalka Cad waxa uu soo saaray bayaan uu ku sheegay in madaxweyne Trump uu war weyn shaaca ka qaadi doono 9-ka subaxnimo ee axadda, xilliga saacadda bari ee Mareykanka.
Militariga Mareykanka ayaa habeenkii sabtida ee xalay gobolka Idlib ee dalka Syria ka fuliyey howl-gal qorsheysan oo lagu beegsaday Al-Baghdadi. Howl-galka ayaa waxaa toddobaad ka hor ansixiyey madaxweyne Donald Trump.Valueimpression Placeholder
Sarkaal ka tirsan Pentagon-ka Mareykanka ayaa wargeyska Newsweek u sheegay in howl-galkaas lagu dilay Al-Baghdadi. Sidoo kale sarkaal kale ayaa Aqalka Cad u sheegay “inay kalsooni buuxda ku qabaan” in Abu Bakar Al-Baghdadi la dilay
Ahmed Madoobe oo Dacwad Lagu soo oogey Iyo Sababta ka danbeysa Arintaasi
Sh. Aadan Siiro oo shaaciyey fadeexad ay ku...
Daawo waalidiinta buux dhaafiyey saldhiga baydhabo
Deg Deg: Ugu yaraan 6 qof ayaa ku...
Dhalinyaro kale oo lagu soo dhaweeyey Marka kale ...
warbixin Man United oo isha ku heysa kubadsameeyaha...
Al-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda weerar lagu dilay Sh....
FAYSAL CALI WARAABE OO Sir badan dibada keeney
shirkii deg degga ahaa ee golaha wasiirada Oo...